व्यवसायीका समस्या समाधानमा सधैं सक्रिय रहन्छुः बराल (अन्तर्वार्ता) – Arthik Awaj
व्यवसायीका समस्या समाधानमा सधैं सक्रिय रहन्छुः बराल (अन्तर्वार्ता)
By आर्थिक आवाज २०७५ आश्विन २ गते मंगलवार ०५:१६ मा प्रकाशित
उपमहासचिव पदका उम्मेदवार
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, ३२औं महाधिवेशन
निजी क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२औं महाधिवेशन यही असोज ५ र ६ गते हुँदैछ । चुनावी मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरु घरदैलोमा व्यस्त छन् । संघको बर्तमान कार्यसमितिमा महिला उद्यमी विकास समिति संयोजक रहेर काम गरेकी महिला उद्यमी सीता बरालले उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । बरालसँग घरदैलो क्रममा प्राप्त प्रतिक्रिया, चुनावी अभियान, उम्मेदवारीको कारण लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
चुनाव मिति नजिकिएको छ । घरदैलोको क्रममा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव मिति नजिकिएको छ । आम उद्योगी व्यवसायीले महाधिवेशनलाई चासोको साथमा हुेर्नुभएको छ । अहिलेको माहोल अनुसार मैले व्यवसायीबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । व्यावसायिक काम गरेका तथा नेतृत्व क्षमता पनि भएका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो । सबै उद्योगी व्यवसायीलाई समेटेर लैजानसक्ने क्षमता भएको व्यक्ति चुन्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुले भन्नुभएको छ । पक्कैपनि योग्य व्यक्तिलाई नै चुन्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ ।
उपमहासचिवमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
अध्यक्षका प्रत्यासी दामु अधिकारीको प्यानलबाट मैले उपमहासचिवमा उम्मेदवारी दिएको छु । व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ । सुन्दर शहर भनेर चिनिएको पोखरा अव्यवस्थित पार्किङका कारण कुरुप बनेको छ । समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्नेछु । व्यवसाय असुरक्षित छ । यसलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न स्थानमा सिसी टि.भी क्यामरा राख्नु आवश्यक छ । यसको लागि पनि हामी पहल गर्नेछौं । व्यावसायिक क्षेत्रमा कर पनि मुख्य समस्या बनेको छ । यसको समाधान गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीलाई कर शिक्षा सम्वन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा घरभाडा पनि समस्या बन्ने गरेको छ । यसको सहजीकरणको लागि भुमिका खेल्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो । पोखरा आपासका सबै व्यवसायी अट्नेगरी छहारी बनेर समस्या समाधानमा हामी लाग्नेछौं । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीबीचको सम्वन्ध अभिभावक र सन्तानको नाता जस्तै बनाउन लाग्नेछु । व्यवसायीलाई पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो अभिभावक हो र हामीलाई समस्या पर्दा समाधानमा पहल गर्छु भन्ने भावना जगाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीसँग मिलरे काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
महिला उद्यमका बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
म आफै पनि महिला उद्यमी हुँ । धेरै भन्दा धेरै महिला उद्यमी उत्पादन गरेर महिलालाई स्वरोजगार बनाउने तथा आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने मेरो लक्ष्य छ । पोखरा पर्यटकीय शहर हो । पोखरेली महिलााले बनाएका सामग्री विदेशसम्म पु¥याउने तथा प्रवद्र्धनमा लाग्नेछु । कोशेलीघर निर्माण हुनुपर्छ । पोखरा आएका पर्यटक त्यहाँ गएर पोखरेली महिला दिदी बहिनीले बनाएका हस्तकलाका सामान किनेर लैजानसक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । जसले महिलालाई उद्यम गर्न थप उत्साही बनाउँछ । पोखरामा पर्यटकको आगमन भएपछि नै हाम्रा सबै व्यवसाय फस्टाउने हुन् । पोखरा तथा आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यलाई व्यवस्थित गर्न सबै पोखरेली लाग्नुपर्छ ।
संघको महिला उद्यम विकास समिति संयोजक भएर के–कस्ता काम गर्नुभयो ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा अघिल्लो कार्यसमितिमा महिला उद्यमी कमिटीमा बसेर काम गर्ने अवसर मलाई मिल्यो । महिला उद्यमी मेला सम्पन्न ग¥यौं । त्यसपछि पनि म अत्याधिक मतका साथ कार्य समिति सदस्यमा निर्वाचित भएँ । महिला उद्यम विकास समिति संयोजक भएर काम गरेको छु । यस समयमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भयौं । विभिन्न कमिटी तथा समितिमा बसेर काम गरेको अनुभव मसँग छ । मेला तथा महोत्सवमा पनि मैले सक्रिय रुपमा काम गरेको छु । महिला व्यवसायीलाई कर तथा व्यवसाय सम्वन्धी कुराको जानकारी दिन विभिन्न कार्यक्रम ग¥यौं र आगामी दिनमा पनि यस्ता कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । कतिपयलाई व्यवसाय दर्ता गरेर संचालन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि थिएन । कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो र हामीले व्यवसाय दर्ता गरेर संचालन गर्नुपर्छ र राज्यबाट पाहिने सेवा सुविधा लिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझायौं ।
महिला उद्यमी मेला कस्तो रह्यो ?
संघ अन्तर्गतको महिला उद्यम विकास समितिको आयोजनामा महिला उद्यमी मेला हामीले सम्पन्न गर्न सफल भयौं । नेपालभरीका महिला उद्यमीहरुको उपस्थितिमा आयोजित महिला उद्यमी मेलाको संयोजक म आफै थिएँ । मेलाले महिला उद्यमीलाई एक आपसमा अनुभव साटासाट गर्न पनि पुलको काम ग¥यो । मेलामा विभिन्न व्यावसायिक तालिम तथा स्वास्थ्य शिविर पनि हामीले संचालन गरेका थियौं । यसले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गरिमालाई पनि बढाएको छ । मलाई विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो त्यो जिम्मेवारी मैले राम्रोसँग पुरा गरेको छु ।
बिगत १० वर्षदेखि म व्यावसायिक क्षेत्रमा आवद्ध छु । म कपडा व्यवसायी हुँ । बिगत ४ वर्षदेखि म पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा छु र सबै व्यवसायीको हितमा काम गरिरहेको छु । अब पनि सबै व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछु । अहिले मैले जसरी सम्पूर्ण व्यवसायीको साथ पाएको छु, भोलिको दिनमा पनि पाउनेछु भन्ने मलाई विश्वास छ । म क्रमिक रुपमा आउने प्रयत्न गरेको छु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा महिला उद्यमी विकास समिति संयोजक भएर काम गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ महिला उद्यमी विकास समितिको सदस्यमा मनोनित भएर काम गर्ने अवसर पाएको छु । यससँगै नेतृत्व तहमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उम्मेदवारी दिएको हुँ । विभिन्न सामजिक संघ संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि मसँग छ । महिला उद्यामीसँग भेटेर समस्या बुझ्ने र समाधानमा पहल गर्दै आइरहेको छु । यही असोज ५ र ६ गते हुनेसंघको ३२औं महाविधेशनमा अत्याधिक मतका साथ मलाई उपमहासचिवमा विजयी बनाउनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।